Umthengisi othembekileyo ongumatshini waseFama kumatshini waseAfrika onesisa sikaVictor
I-Bhanki yoPhuhliso yase-Afrika ibize amazwe amaninzi ase-Afrika ukuba yakhe kwakhona iindawo ezisemaphandleni ,Ndizamile ukuziguqula ukusuka kwezoqoqosho oluhlelelekileyo ziye kwezoqoqosho olunempumelelo, ngalo ndlela siphucula ubomi bobutsha base-Afrika. Inkcubeko ayisiyondlela yobomi okanye mveliso, kodwa kunye nethuba lokuzenzela ubutyebi. Ukufezekisa lo mbono mkhulu, sidinga ukukhawulezisa ubuchule bokulima e-Afrika, kunye nokuguqula ezolimo zibe licandelo elinengeniso. Ngaphezulu koko, IAfrika kufuneka ikhawulezise ukukhula kwayo kwezolimo. Amazwe amaninzi sele eqala le projekthi, njengeKenya, Nayijeriya, Mzantsi Afrika, Thogo, Bhenin, Gana, IAngola neSierra Leone, bathathe inyathelo lokumema iethenda zoomatshini basezifama kwaye baxhase amafama ngenkxaso yezolimo.
Sithengise abathengi boomatshini bezolimo kumazwe amaninzi aseAfrika. Sibonelele 130 ibeka iigrasi zerhasi yecassava ze-Kenya kwi 2013, 60 ibeka imibundlo yengqolowa eNigeria ngaphakathi 2017, abavuni belayisi kunye neemayile zerayisi eAngola ngaphakathi 2018, kwaye ngoku inentsebenzo yeshishini kunye namazwe amaninzi ase-Afrika. Oomatshini beVictor kwifama basebenzise izixhobo ezahlukeneyo eziqhutywa ngumbane kwifama ngenxa yokunqongophala kombane, ezinje ngeedizili eziqhutywa ziidizili, Iipilisi zerhasi eziqhutywa yirhasi, Iirhasi eziqhutywa ziirhasi,umatshini wokudaya iinkozo zedizili njalo njalo.
Oomatshini bokulima abenziwe nguVictoria Fama wasebenza uneempawu ezilandelayo.
1.Ukusebenza. Oomatshini beefama zeVictor Fama yoomatshini balandela inkqubela phambili yesayensi kunye netekhnoloji, rhoqo ukwandisa imisebenzi yeemveliso. Oomatshini abaninzi basebenza ngemisebenzi emininzi , njengengqolowa yokubhula, umququ wesando sokucheba isando., irayisi kunye negreyidi,umatshini omnye onemisebenzi emibini .
2.Ixabiso eliphantsi.Ukuqinisekisa indawo ebonakalayo neyomeleleyo yoomatshini bezolimo, Oomatshini beVictor Fama babonelela ngeyona nto iphambili kunye nelona xabiso lisezantsi kubalimi.
3.Ukulula koomatshini bezolimo, ngokweemfuno zamandla zemimandla eyahlukeneyo sinokuwuxhobisa umatshini ngeenjini ze-dizeli okanye zeemoto,Umatshini wezolimo unokuxhotyiswa ngeetayara ezenziwe ngokwezifiso zihamba ngokulula.